Archive du 20180119
Rajao sy Mahafaly Rava ny tsena
Sanganehana ny mpanara-baovao omaly, noho ny tsy fahitana ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier nandritra ny fitokanana ny tranon’ny minisiteran’ny Indostria teny Anosy omaly.
Lalàna iatrehana ny fifidianana Mbola maloto daholo, hoy ny Teza
Mbola manana herintaona ny fitondrana ankehitriny, hoy ny filoha nasionalin’ny antoko politika Teza, Jean Louis Rakotoamboa, hidirana ao anatin’ny antsoina hoe “Cadre legal” amin’ny lafiny rehetra.
Rivo Rakotovao Tsy atokisan’ny filoha intsony…
Misalasala tanteraka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny fandaminana ny politikany sy ny fiomanany amin’ny fifidianana.
Fanodinkodinana ny saim-bahoaka
``Miala any e, miala any ry be ... Sinema``. Niteraka resabe teny anivon ny fiarahamonina ka anisan`ny tena nanamarika ny mpanara-baovao ilay resaka ``Kolikoly avo lenta`` nahavoarohirohy tompon`andraikitra ambony maro eo anivon`ny fitondrana mahakasika an`i Houcine Arfa,
O ry Jean, mba mampanontany tena ahy Hay ve ry Antanimora sy ry Tsiafahy Ka misy vidiny sy hofany azo efaina, Ka tsy mampaninona na mandatsak'aina ?
«Telma Super Coupe 2017 » eny Vontovorona Hahazo fanomezana ireo mpijery 1.000 tonga voalohany
Hangotraka ny eny amin’ny kianjan’ny Complexe Culturel et de Loisirs CNaPS Vontovorona hanatanterahana ny lalao miverin’ny “Telma Super Coupe de Madagascar 2017” rahampitso sabotsy 20 janoary.
Fifidianana filohan’ny ligin’ny Analamanga Endrika fanapotehana ny rugby, hoy i Andry La Pie
Mitohy ny disadisa misy eo amin’ny tontolon’ny taranja rugby Malagasy ankehitriny izay miainga eo amin’ny fifandraisana tsy mety milamina eo anivon’ny mpitantana ny Malagasy Rugby an-daniny sy ny mpitantana ny Analamanga Rugby an-kilany.
Vaksiny Polio Nilamina tamin’ny ankapobeny
Nizotra tamim-pilaminana ny andro voalohany sy ny faharoa nanatanterahana ilay fanaovam-baksiny faobe iadiana amin’ny aretina lefakozatra manerana ny Nosy ho an’ireo ankizy latsaky ny dimy taona.
Fifaninanana tsy ara-drariny Velon-taraina ny mpandraharaha tsy miankina
Velon-taraina ireo mpandraharaha tsy miankina noho ny gaboraraka misy ankehitriny amin’ny fidiran’ny entana avy any ivelany izay tsy manaja ny fenitra sy ny kalitao araka ny tokony ho izy.
Agence Première Ligne 50 isa ny « salons » vita tao anatin’ny 20 taona
Nambaran’ny mpitantana ny Agence Première Ligne, Michel Dominichini-Ramiaramanana, tetsy Antaninarenina omaly alakamisy 18 janoary fa nandritra ny 20 taona (1998-2018) dia « salons » niisa 50 no tontosa teo ambany fitarihan-dry zareo.
Vatsim-pianarana eny Ankatso Tsy mbola nivoaka ny tetiandron’ny DEGS
Milamindamin-dratsy indray aloha ny eny anivon’ny anjerimanontolon’Antananarivo amin’izao.
Jay’a Mampita hafatra anaty gadona mafana
5 taona izao no niloman’i Robena Marco François na Jay’a tao anatin’ny mozika. Tarika Marco no anarana nentiny sy ny ekipany tany am-piandohana raha mbola tsy nivohy afa-tsy ny gadona Tsapiky.
Mialohan'ny lanonana ofisialy handraisana azy ireo amin'ny 22 janoary ho avy izao, dia naseho tamin'ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ireo jeneraly 58 vaovao sy vao nisondrotra eo anivon'ny tafika malagasy,
Tontosa omaly hariva tamin'ny 6 ora sy sasany ny asa famerenana ny fifamoivoizana notanterahin'ny linisiteran'ny asa vaventy teo amin'ny tetezan'Iandratsay (PK 53 + 700).
Angletera sy Frantsa Manamafy fiaraha-miasa
Nitsidika an’i Angletera omaly alakamisy i Emmanuel Macron hiatrika ny fihaonamben’ny fifandraisana eo amin’ny Frantsay sy i Britanika miaraka amin'ny praiminisitra Theresa May.
Sakafo miditra sy mivoaka an’i Madagasikara Nohenjanina ny fanaraha-maso
Arahi-maso akaiky ireo karazan-tsakafo miditra sy mivoaka eto amintsika manomboka izao. Anisan’ny nisantaran’ny fitondram-panjakana izany ny fanakanana ireo ronono karazany roa ho an’ny ankizy izay efa tsy azo amidy eto amintsika intsony,
Fampiakarana tsena etsy amin’ny Esplanade Efa nifanarahana tamin’ireo mpivarotra tompon’ny tsena
sy misy ambadika akory ny fampiakarana ny biraon’ny tsena etsy amin’ny Esplanade Analakely, hoy Razafitsihoarana Edison, tale misahana fanajariana ny tanàn-dehibe eto an-drenivohitra fa efa nifanarahana tamin’ireo tompon’ny pavillon teo aloha ihany.
Vidim-bary eny an-tsena Nahitana fihenany ny eny Anosibe
Nahitana fihenany ny vidim-bary eny an-tsena taorian’ny nandalovan’ny rivodoza AVA. Anisan’izany ny eny amin’ny tsenan’Anosibe izay misy ireo mpivarotra mpambongady marobe.